एकलौटी डि*भोर्स गरि घरजग्गा बेची श्रीमती नाठोसगँ, श्रीमान सडकमा(भिडियो हेर्नुस) – Charchit Entertainment
एकलौटी डि*भोर्स गरि घरजग्गा बेची श्रीमती नाठोसगँ, श्रीमान सडकमा(भिडियो हेर्नुस)
August 23, 2021 Auther
वैदेशिक रोजगारले कतिको घरबार जोडेको छ भने कति को घरबार टोडिएको पनि छ । यस्ता घटनाहरु दिन प्रति दिन हामिले देख्दै सुन्दै आएका छौ । अहिले फेरि यस्तै घटना बाहिर आएको छ । संखुवासभाकि एक महिला आफ्नो श्रीमान बिदेशमै हुदा कुट*पिटको आरोपमा एकलौटी डि*भोर्स गरि सम्पुर्ण सम्पत्ति बेचेर अर्कै सगँ भा*गेकी छिन । सम्पुर्ण सम्पत्ति र बिदेशबाट पठाएको पैसा लिएर हिडेपछी श्रीमान अहिले घरबार बिहिन छन ।
संखुवासभा घर भएका सालिग्राम राइले नौ वर्ष अघि दिपा राई सगँ बिबाह गरे । बीस महिना सगैँ बसेका उनी घर सल्लाह गरि फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तिर लागे । उनिहरुबिच सन्तान भने भएका थिएनन । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि उनकि सासू लगाएतको भनाइमा उनले आफ्नो नाममा भएको गछियाको जग्गा श्रीमतिको नाममा गरिदिए । काठमाडौँ तिरै बस्ने सल्लाह भएको र यताको बेचेर उतै किन्ने सल्लाह भएको थियो उनिहरुको । उनका ससुराली काठमाडौँ तिरै बस्थे ।
उनी अहिले सात वर्ष मलेसिया बसि फर्किएका छन । श्रीमतिले जता बस्छु भनो त्यतै आफुले राखेको उनी बताउछन । आफू बिदेशमै हुदा एक वर्ष अगाडि आफ्नो कान्छो जेठान दाजु मार्फत उनकी श्रीमती दिपाले अर्कै सगँ बिहे गरेको र एउटा छोरा पनि भएको थाहा पाएको उनले बताए । बिहे अर्कैसगँ कहिले बिहे गरेको त्यो आफुलाइ थाहा नभएको उनले बताए । तर जेठान दाइको भनाइ अनुसार भने अर्कै बिहे गरेपछी पनि आफुहरुको कुरा भएको रहेछ्न भन्ने लागेको उनले बताए ।
पैसा पठाउने भएकोले अर्कै सग बिहे गरेपछी पनि दिपा आफुसगँ बोलेको होला भन्ने उनको अनुमान छ । जब उनले बिहे गरेको थाहा पाए तब देखि दिपाको फोन लाग्न छोड्यो । त्यसपछी भने कुनै सम्पर्क नभएको उनले बताए । कोरोनाको महा*मारिका कारण आफू तत्काल आउन नसकेको उनले बताए । तर जब उनी नेपाल आए यहाँ आउदा उनले थाहा पाए आफ्नो जग्गा पनि बेची सकेको रहेछ । उनले कमाएर पठाएको पैसा त गयो गयो जग्गा पनि गयो । अहिले उनिसगँ केही पनि छैन । खान लाउन नै समस्या परेको उनी बताउछन । अहिले आफन्तकोमा बस्दै आएको उनले बताए ।
आफू बिदेशमै हुदा 2073 सालमा एकलौटी डिभो*र्स गरेको पनि उनले थाहा पाए । आफुलाइ खान लाउन नदिएको, कुट*पिट गरेको, दा*इजो नल्याएको भन्दै आफुलाई या*तना दिएको आ*रोप लगाइ एकतर्फी डि*भोर्स गरेको थाहा पाएको उनले बताए । डोभो*र्सको साक्षीमा उनका कान्छा जेठान दाइको पनि नाम भएको उनले बताए । जस्ले उनलाइ दिपाले अर्कै बिहे गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यो देख्दा उनलाइ ससुरालीहरु सबै मिलेर फसाएको भन्ने लागेको बताए ।
उनी अहिले दिपासगँ सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छन । आफू अन्यायमा परेको भन्दै उनले सबैलालाई दिपाको खोजी गरिदिन आग्रह पनि गरे । आफू उस्लाइ डि*भोर्स दिन तयार भएको तर आफुले दुख गरि कमाएको सम्पत्ति भने आफुले पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उस्ले जति सुकै बिबाह गरेपनी त्यो उस्को खुशिको कुरा हो । तर यसरी अरुलाइ घरबार बि*हिन बनाउन नपाउने भन्दै आफुले न्याय पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । (तल भिडियो हेर्नुस)
पोखराको कोठामा चन्द्रले आफ्नो श्रीमती र मनिषाले आफ्नो श्रीमानलाई रंगेहात भेटे(भिडियो हेर्नुहोस्)
रोएर बाचौ भने आँसु पुछ्ने हात छैनन, बाबुआमाको पनि माया पाइनन्(भिडियो हेर्नुस)
अस्पतालमा उपचाररत नायिका निशा घिमिरेको मृ’त्यु ? के हो वास्तविकता ?(भिडियो हेर्नुहोस्)
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई कोरोना संक्रमण
आफ्नै बुबालाई मा*र्छौ भन्दै छोराहरू, श्रीमती र छोराको बिचल्ली(भिडियो हेर्नुस)